Shan dhismo oo masaajid iyo kaniisado loo kala badalay - Tilmaan Media
Madax, hoggaamiyeyaal diin iyo dad kale ayaa ka falceliyay, balse madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa difaacay go’aankaas ka soo baxay maxkamad.
Haddaba aanu eegno shanta dhisme ee masaajidda ahaan jiray ka dibna kaniisad laga dhigay ama kaniisad ahaan jiray oo hadda masaajid ah:
1- Aya Sufiya – Turkiga
Dhismaha caanka ah ee madxafka ahaa ee ku yaalla Istanbul – Aya Sofiya – ayaa dib loogu dhigay masaajid.
Dhismahan wuxuu ahaan jiray macbad cathedral ah oo ay lahaayeen boqortooyo haystay diinta Orthodox oo maamuli jirtay Istanbul (oo xilligii Cusmaaniyiinta ay qabsanayeen lagu magacaabi jiray constantinople).
Sannadkii 1934, ayaa laga dhigay xarun madxaf ah, haddana waxay ka mid tahay Goobaha Dhaqanka ee UNESCO ay aqoonsan tahay.
Qaar ka mid Musliniinta Turkiga ayaa muddo dalbanayay in dib looga dhigo masaajid, in kastoo ay jireen dad aragtidaas diidanaa.
Dhimahaas ayaa ahaan jiray macbad, waxaana la sheegay in markii Muslimiinta ay qabsadeen halkaas, sannadkii 1528, laga dhigay masaajid.
Dad badan oo Hindu ah waxay aaminsan yihiin in dhismahaa uu yahay meesha uu ku dhashay mid ka mid ah “dadka ay caabudaan” oo lagu magacaabo Lord Ram.
Muslimiintana waxay sheegeen in muddo aad u fog oo jiilal ah ay halkaas ku cibaadeysanayeen.
Maxkamadda waxay sheegtay in warbixinno cadeyn ah oo laga sameeyay dhismaha lagu ogaaday in “uusan ahayn mid Muslimiin ay dhiseen”. Waxaa tijaabada lagu sameeyay haraaga dhismihii Masjidka Babri ee la burburiyay.
Go’aankii maxkamadda ayaa lagu sheegay in Dhimsha dib loogu celinayo macbadka Hinduga ee Lord Ram, iyadoo Muslimiintana la siinayo dhul meel kale ku yaalla si masaajid ay uga dhistaan.
Balse, maxkamaddaas ayaa xukuntay in burburintii Masaajidka Babri uu ahaa arrin sharciga ka soo horjeeda.
Golihii Muslimiinta oo aan ku qancin go’aanka maxkamadda ayaa sidoo kale sheegay in aysan racfaan ka qaadan doonin xukunkaas.
3- Masaajidka Cordoba
Sannadkii 2014, boqollaal kun oo qof ayaa saxiixay dacwad ah in dhismaha caanka ah ee cathedral-ka ah laga dhigo kaniisad Catholic ah
4- Britain – Kaniisad hore oo Masaajid laga dhigay
Sannadkii 2007, Maamulka magaalo ku taalla Britain ayaa u codeeyay in kaniisad hore laga dhigo masaajid.
Codka Golaha deegaanka Clitheroe oo ahaa mid aad isugu dhow ayaa dhaliyay in meeshaas lagu soo afjaro muran qaraaraa oo aad u dheeraa, wuxuuna suurageliyay in Muslimiinta laga badan yahay ay helaan meel ay ku cibaadeystaan.
Arrintaas waxaa Muslimiinta ku hoggaaminayay nin asal ahaan ka soo jeeda Pakistan oo lagu magacaabay Sheraz Arshad, wuxuuna sheegay in Muslimiinta ay cod ku leeyihiin in dhismaha Kaniisadda ee la iska xiray ay ka dhigtaan xarun cibaado.
Xilligaas ee uu soo baxayay go’aanka, waxay Muslimiinta ku noolaa deegaankaas ahaayeen illaa 300, balse hadda aad ayey u sii bateen.
Sannadkii 2003-dii, Muslimiinta Spain ayaa ku guuleystay in ay dib u helaan Masaajidka Granada, kaas oo muddo 500 oo sano ah gacantooda ka maqnaa.
Magaalada uu masaajidkaas ku yaallo ayaa mar ahaan jirtay meeshii ay ugu awoodda badnaayeen Muslimiintii Yurub.
Sida ay sheegeen Muslimiinta, in ay dib u helaan masaajidkaas waxay ahayd soo nooleyda kaalinta Islamka iyo “sharafta taariikhda Muslimiinta”.
Balse waxaa jiray dad badan oo reer Spain ah oo aad uga carooday arrintaas. “Qof kasta wuu diidan yahay balse siyaasad ahaan way baqayaan in ay hadlaan”, ayuu yiri qof magaaladaas ku sugnaa oo diidanaa go’aanka masaajidka looga dhigay dhismahaas.
Diyaarad gargaar sidday oo ku buruburtay magalada Baladweeyne